MOE > Afan Oromo > Customer Charter
mul’ata<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
· Suuqii tokkoo dhabudhan tajaajila onliniitif(internetidhan). · Odeeffannootti fayyadamudhan,walqunnamitii fi tajaajila transakishinalii kara tekinologii ammayyattii kan sadarka isa egeen.
· Tokkumma guddina Itiyoophiya fi kayyoo jijjirra. · Ciminaan kan filatamuu mamilaa chanalii gidduu galeesatin haala gariidhan rabisuu fi saliphadhan tajaajila itti fayyadamuu kara mala elektironikatin uummata walqunamisisuu tajaajila kan uummata fi dhunfaa. · Iddoo undumattii yaada debii ‘uuummata fi imammata qona irrat hirmachudhan fi kara haala ammayatiin tajaajiluu. Kaayyoo: · Tajaajili chanali kan kenamuu 24 x 7 dhan. · Tajaajila elektironikatiin mamilitoota tajaajiluu.
· Tajaajila Ministeera kan dhabii hinqabineen itti fayyadamuu.
· Jiduugalessa marii forumitiin fi ykn blogsiidhan lammuma fi hirimmanna daldaloota fi yaada imaamata fi yaada ‘uummata.
· Lammii tookkoo tokkon hunduma fi jiratoota Itiyoophiya. · Daldaloota. · Bulchinsa ‘Uummata fi mindeeffamtoota . · Foyya’insa fayyaa. · Dhaabbata Mootumma kan hintanee fi dhaabbata adungaleessa. Sadarikkalee isa kan egee waligala:
· Nui waligaltee sirri ta’eetti fayyadamudhan fi dhugaqabesa odeeffannoo kara portal ministeeratiin .odeeffannoon barbachisa ta’ee kara portalii ministeeratiin ni ammayefama akka barbachisa ta’eetti. · Nui kan dhugomsinuu 24 X 7 X 365 fayyadammi kan persenttii 99 % hanga yerron ga’utti portal irra fayyadamun nidandama.
· Nui kan walitti fidinuu egumissa tekinologii walitti fiduudhan industrii data mamilitoota eguudhan akka hinjijiraminee ykn hinbadinneef.portalii Kenya kan of’keessatti qabaate paswaordii ittin lixaa sistemicha fi protokolii SSL data kan dhokisuu.
· Portaliin ministeera 100% Interneti Eksploreri vershini 6.0 kan walfakkatudha fi isa ol,fi bayyinan kan walfakatuu firfoksii, Netskapi fi waligala broseroota webii tidhan . · Portaliin minsteera kun kan qopha’ee Afaan oromo,afaan Amahaara, Afaan Ingilizii fi Afaan Tigirenya tindha.
· Nui yaada jajjabina fi yaada debi tajaajila kenyaarratti fi portalii kan ittin darbuu midiyya karaa gara garatiin bifa qayyabanna,bifa yaada debii fi forumiitin.. · Nui tokkon tokko fi mirgaa namumma fi ofittiamanuumma kan kabajinnuudha. · Portaliin ministeera kan ibsamuu dhabinsa waligaltumma adeemissa ittin tokkumaa uumuf mamiltoota cimisuuf gargaruu fi jajabesudha. Hiikaa tajaajila sadarikkaa murta’ee:Fayyaduman Odeeffannoo portalii ministeera fi tajaajilawan uummamee fi kan gargarmuu mootummalee gara gara fi dhaabbata mootumma kan hintaneen,fay’idan tajaajila kana fi sirrumman odeeffannoo ittigafatamumma kan uummata kabajisuu kara kara tajaajila portalii ministeeratindha. Kabaja fi hiri’naa mamiltootaNutii kan qophofinuu ciminan isiin gargaruu fi garagassa cimadhan isiin gargarudha yeroo unduma. Nutii isin niamana cimuuma Kenya malee ,wantootin yeroo haala garidhan demuu didee fi yeroo numudatuu isinirrs dhaga’udhaf bayyee qopha’ootadha.Yoo rakkinii isiin mudatee kara tajaajila Kenya kami’yuu kan kara portalii biyyaleessa ykn yaada keenudhaf kan itti fayyadamitan /yaada debii, kabajan isiin gaffanna akka nuqunamittan karaa chanaloota armaan gidiin ittifufaaniin.
· Kara bili.: +251 11 551-7011 wixaata –dilbaata saa 8 pm hanga 5 pm Interneti(Online): kan dhumee “yaada debii” bifa kan ittin itti fayyadamtan portalii ministeera www.moe.gov.et